ProtonMail Inowedzera Elliptic Curve Cryptography kune Yayo Sevhisi | Linux Vakapindwa muropa
ProtonMail inowedzera elliptic curve cryptography kusevhisi yako
Darkcrizt | | Updated on 26/04/2019 19:48 | Noticias
Boka reProtonMail rakazivisa mune blog blog kuti yako yakachengeteka email sevhisi ikozvino inotsigira elliptic curve cryptography (ECC) kuwedzera chengetedzo nekukurumidza.
Zvinoenderana neye blog positi, iyo kambani yanga ichishanda kwemwedzi yakati wandei kuseta rutsigiro yenzira nyowani dzekrisptographic dzinopa chiitiko chinokurumidza pamwe nekuchengetedzeka kwakaenzana kana kukuru.
1 ECC inouya kuProtonMail
1.1 ECC inogona kunge iri yemberi muyero
1.2 Elliptic Curve Cryptography (ECC) yakachengeteka zvakanyanya
1.3 Nhoroondo dzekare zvakare dzinogona kunakidzwa neECC
ECC inouya kuProtonMail
Elliptical curve cryptography ndiyo yakanyanya yepamusoro cryptographic system inowanikwa uye timu yeProtonMail ikozvino inoita kuti hunyanzvi uhu huwanikwe kune vese vashandisi pawebhu rese, nharembozha uye desktop zvinoshandiswa zveevhisi sevhisi.
ProtonMail yakavaka mukurumbira wekuchengetedza email, kuvanzika, uye nyore kushandisa.
Iyo kambani yakaita sarudzo yekuisa elliptic curve crypto mukuwedzera kune RSA encryption. Nekudaro, ikozvino iyo ECC ichave yakasarudzika standard kune ese nyowani kero muProtonMail uye timu yeProtonMail inopa vashandisi varipo, nekutumira yavo blog posvo, mukana wekuvandudza avo RSA kero.
ECC ndeimwe yemhando dzakasimba kwazvo dze crypto.
Icho chizvarwa chinotevera cheveruzhinji kiyi cryptography, uye zvinoenderana nesvomhu. Inopa hwaro hwakachengeteka zvakanyanya kupfuura yekutanga chizvarwa yeruzhinji kiyi cryptography masisitimu seRSA.
ECC inogona kunge iri yemberi muyero
Mawebhusaiti mazhinji uye akawanda arikushandisa ECC kuchengetedza zvese kubva kuhukama hwevatengi hweHTTPS munzira iyo dhata inopfuudzwa pakati penzvimbo dzedata.
Zvinoenderana nechikwata cheProtonMail, kana mushandisi achinetsekana nekusimbisa danho repamusoro rekuchengeteka achichengetedza mashandiro, saka ECC isarudzo yakangwara.
Zvinoenderana neye blog positi, vashandisi vanogona kunge vatove kushandisa iyi crypto mune mamwe masevhisi, seWhatsApp, Chrome, Firefox, Opera uye Tor.
Iyo RSA-yakavakirwa paruzhinji kiyi cryptography system, zvakare masvomhu yakavakirwa, yanga iri yakajairwa mumunda kwemakumi emakore.
Elliptic Curve Cryptography (ECC) yakachengeteka zvakanyanya
Zvinoenderana nechikwata chePrtonMail, kiyi yeruzhinji cryptosystems, kunyangwe iwo akakwirira-bit RSA curves kana elliptical curves, akachengeteka zvakanyanya.
Nekudaro, iyo chete nzira inoshanda yevanorwisa kubira chero encryption system ndeye kushandisa zvisizvo kushomeka kwekuitwa kwayo, timu yakanyora.
“NeECC, pane kurwisa kuviri chete kunozivikanwa, kumwe kunotora mukana wemajenareta enhamba uye imwe inoshandisa zvinhu senge kushandiswa kwesimba kwesimba kutora ma index pamakiyi. Zvinhu zviviri izvi zvinonyatsonzwisiswa uye zvave kurerutswa kwemakore, ”rakanyora rakadaro timu.
“Isu takasarudza imwe elliptical curve system inonzi X25519, inokurumidza, yakachengeteka uye inonyatsopokana nekurwisa kwekuenderana. "Zviri nyore kuita uye, kune izvo zvakakosha, haisi nyaya yechero zvirevo zvepatent," timu yakawedzera.
Kumirira kusvika kwemakomputa ehuwandu, kambani yatora makiyi eECC inozova makiyi ekushomeka emataresi ese matsva muProtonMail. Iyo kambani inokoka vashandisi vanotova neProtonMail account kuti vavandudze yavo RSA makiyi kune yega email kero.
Nhoroondo dzekare zvakare dzinogona kunakidzwa neECC
Kugadziridza account yako, sIvo vanofanirwa chete kutevera inotevera mirairo:
Unganidza kune yako iripo ProtonMail account
Mariri vanofanira kuenda ku Zvirongwa
kuwana kiyi menyu
tinya bhatani «Wedzera nyowani nyowani» uye sarudza kero iwe yaunoda kuwedzera makiyi kwairi ECC uye tinya zvinotevera
Wobva wasarudza "X25519 (Yemazuva ano, Kurumidza, Yakachengeteka)" wobva wadzvanya pane kugadzira makiyi . Ivo vanozobvunzwa kuisa yavo account account.
Mutsara wekiyi yeECC, chengeta mune yekudonha-pasi menyu uye sarudza "Gadzira Main".
Izvi zvichaita ECC kiyi yekumira yeiyi email kero.
Iyo kambani inokurudzira kuti iwe usadzime chekare maRSA makiyi, sezvo kuita kudaro kuchizorasikirwa nekwaniso yekutsikisa ese ako aripo emaemail.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » ProtonMail inowedzera elliptic curve cryptography kusevhisi yako
Mkchromecast, tumira zvirimo kuChromecast yako kubva kuPC yako nenzira yakapusa